निशान न्युज श्रावण २५, 2077
काठमाडौं । लकडाउन हटेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । आइतबार मात्रै काठमार्डाैं उपत्यकाभित्र थप ९२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा संक्रमितको कुल संख्या ११ सय ३६ पुगेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा ९ सय १२, ललितपुरमा १ सय ३९ र भक्तपुरमा ८५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंलाई नै उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा लक्षणसहितको संक्रमित देखिएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।’
त्यति मात्रै होइन, वनस्थली, टेकु र टंगाल, बिजुली बजार क्षेत्रका आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बालाजु, बाँसबारी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि संक्रमित फेला परेका छन् । अत्याधिक रुपमा आम मानिसको चापा हुने असनमा संक्रमित फेला परेका छन्  ।
सिल भएका क्षेत्रहरु
संक्रमण रोक्नका लागि काठमाडौंका व्यापारीक केन्द्र न्युरोड, असन, इन्द्रचोक, कोटाल टोल, हाँडीगाउँ, गहना पोखरी क्षेत्र सिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।